Jiwan saili – Page2– सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
Posted in: २०७४–चुनाव, Jiwan saili, Sahitya
देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलद्वारा नयाँ वर्ष २०७६ को शुभकामना व्यक्त
काठमाडौं । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले नयाँ वर्ष २०७६ को हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष गजुरेलद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ “सम्वत् २०७५मा नेपालको सन्दर्भमा नकारात्मकपक्ष नै हाबी भएको पाइए” पनि “नव वर्ष २०७६” भने “नेपाली समाजको अग्रगामी परिवर्तनका निमित्त फलदायी बनोस् भन्ने सदिच्छा प्रकट” गरिएको छ । […]
सरकार किन मौन छ खतराको पूर्व संकेत दिने मौसमी संयन्त्र राख्न ?
नेपालमा हावाहुरी, भूकम्प र ज्वालामुखी तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरुको पूर्व जानकारीका आवश्यक संयन्त्रहरुको निकै अभाव छ । यसतर्फ न त सरकारको न त कुनै निजी संघसंस्थाहरुको ध्यान गएको छ । राज्यका हर्ताकर्ताहरु खर्बौको कमिसन कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरामा जति पूर्व सचेत र सतर्क छन्, तर देशको जनधनको क्षतिहुने कुरामा पूर्व सचेत र सतर्क छैनन् । […]
Posted in: Jiwan saili, mainNews, Tippani Bislesion
अबदुलसलाम खानद्वारा मुस्लिम आयोग अध्यक्ष अन्सारीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं । मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष अन्सारीविरुद्ध कपिलवस्तु जिल्लाका अबदुल सलाम खानद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको छ । मुस्लिम आयोगमा नियुक्त भएलगत्तै अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै खानद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको हो । दायर रिटमा अन्सारी नागरिकता विवादमा परेकाले आयोगको अध्यक्षका लागि उपयुक्त नभएको आइतबार नै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए […]
मानव शरीरको लागि बरदान हो लसुन
काठमाडौं । आजभोलि लसुन निकै प्रयोग गरिन्छ । विशेष गरी खानामा यसको प्रयोग निकै आएको छ । प्रायः खानाका आइटममा यसलाई छुटाइएको हुँदैन । पहिले पहिले ब्राहमण जातिका मानिसहरुले लसुन नखाने चलन निकै व्यापक थियो । तर हाल यसलाई समाजले पनि पचाएको छ । सबैले लसुन सागसब्जीका रुपमा खाने गरेका छन् । लसुन औषधिका रुपमा […]
Posted in: hamroGaun, Jiwan saili
हृदयघात के हो ? के हुन्छ यसको पूर्व संकेत ?
कुनै पनि धमनीमा शतप्रतिशत अबरोध भई मुटुको मांसपवेशीले काम गर्न नसक्नु र सो भागको मृत्यु हुनु नै हृदयघात हो । मुख्यतः मुटुको देब्रेतिरको मुख्य धमनीमा अबरोध भएमा सो हृदयघात प्राणघातक पनि हुन सक्छ । जीवनशैली र खानपानका कारण आजभोली सबै उमेरका मानिसमा हृदयघातको जोखिम बढ्दो छ । एक्लै भएको अबस्था वा अस्पतालको पहुँचबाट टाढा भएको […]
क्रान्तिकारी पत्रकार पंगेनीको भैसी पालन, भन्छन्– ‘पत्रकारिता गरेर जीवन धान्नै सकिएन’
नवलपुर । नवलपुरको पुरानो कावासोती चोकबाट करिब डेढ किमी दक्षिण कावासोती नपा–१४, त्रिभूवनीमा क्रान्तिकारी पत्रकार नारायण पंगेनीले भैसी पालन थालेका छन् । करिब डेढ दशक पत्रकारिता पेशामा बिताएका पंगेनीले पत्रकारिता पेशा छाडेर नौं महिना अघिदेखि भैसी पालन सुरु गरेका हुन् । उनी नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) निकट क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत हुन् । उनले […]
Posted in: २०७४–चुनाव, hamroGaun, Jiwan saili, mainNews, National News
काठमाडौं । देशमा सुशासन कायम गर्ने भन्दै दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गरेर निर्माण भएको नेकपाको ओली सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु सबै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको कुरा पूर्वी नेपालको इलाममा आफ्नो सोह्रौं अनसन सुरु गरेका डा. गोविन्द केसीले बताएका छन् । उनले कर्मचारीहरुलाई बलीको बोका बनाएर राजनीतिज्ञहरुलाई क्लिन चिट दिने अभ्यास गरिरहेको, देशमा हत्या र बलात्कारजस्ता अपराधहरु बढिरहेको, […]